‘पशु प्राविधिकहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन गरेन’ – Chitwan Post
‘पशु प्राविधिकहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन गरेन’
पशुपालन गर्ने किसानमाझ धर्मराज अधिकारी ‘चिरञ्जीवी’ चर्चित नाम हो । रत्ननगर–१३, जगमंगला निवासी अधिकारीको दिनचर्या बिहानदेखि मध्यरातिसम्म गाउँघरमा गाईभैंसीको कृत्रिम गर्भाधारण र पशु उपचार गर्दैमा बित्छ । शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पसमा कमर्स पढ्दापढ्दै १५ महिने भेटरीनरी तालिम लिएका उनले दुई दसकअघिदेखि व्यावसायिकरुपमा जेटिए पेसा सञ्चालन गरिरहेका छन् । चितवन– नवलपुर पशुपक्षी औषधि व्यवसायी संघमा तीन कार्यकाल पदाधिकारी भई काम गरेका उनी नेपाल पशुपक्षी औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् । नेपाल पशु स्वास्थ्य प्राविधिक संघ (नेल्टा)का जिल्ला अध्यक्ष रहेका उनी जयमंगलामै चिरञ्जीवी भेट फर्मामार्फत् किसानलाई प्राविधिक सेवा दिइरहेका छन् । निजी क्षेत्रका प्राविधिकहरुले दिनरात नभनी काम गरे पनि राज्यले उपेक्षा गर्दै आएको उनको गुनासो छ । प्रस्तुत छ, जेटिए अधिकारीसँग चितवन पोष्ट दैनिकका सहसम्पादक केशव भट्टराईले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप–
१) भेटरीनरी व्यवसाय कहिलेदेखि सुरू गर्नुभयो ?
–२०५६ सालदेखि सुरू गरेको हुँ । जब म शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पसमा कमर्श पढ्दै थिएँ । त्यसअघि जिल्ला पशसेवा कार्यालयबाट ३५ दिनको विशेष पुनर्ताजगी तालिम लिने अवसर पाएको थिएँ । तालिमपश्चात् डाक्टरहरुले भेटरीनरी अध्ययनमा लाग्न उत्प्रेरणा दिनुभयो । प्राविधिक क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन सकिने भएपछि १५ महिने भेटरीनरी तालिमपश्चात् व्यवसाय सुरू गरेको हुँ ।
२) तपाईंले व्यावसायिक रुपमा किसानलाई केकस्तो सेवा दिनुहुन्छ ?
–म दैनिकरुपमा पशुपालक किसानको घरघर पुग्छु । पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा मैले दिनुपर्छ । जस्तै, बन्ध्याकरण सेवा, भ्याक्सिन सेवा, गाईभैंसीमा कृत्रिम गर्भाधारण सेवा, भेटेरीनरी मेडिकल सेवा, पशु उपचारसम्बन्धी सबै सेवा दिँदै आएको छु ।
३) वार्षिक कति गाईभैंसीमा कृत्रिम गर्भाधारण गराउनुहुन्छ ?
–वार्षिकरुपमा १८ सयदेखि दुई हजारको संख्यामा गाईभैंसी र बाख्रामा कृतिम गर्भाधारण गराउँछु । यसभन्दा धेरै त गाईभैंसीको उपचार गराउँछु ।
४) भनेपछि यो पेसाप्रति तपाईंको पूर्ण सन्तुष्टि छ ?
–खोइ के भनुँ । सन्तुष्टि छ भनौँ कि छैन भनौँ । छैन भनौँ भने २० वर्षदेखि यही पेसा अंगाल्दै आएको छु । फिल्डमा काम गर्न निकै गाह्रो छ । किसानलाई सेवा दिनुपर्ने काम झनै चुनौतीपूर्ण छ । राति १२ बजे पनि सुत्न पाइँदैन । किसानले बोलाएको बेला २४सै घन्टा उपस्थित हुनुपर्छ । किसानले पनि समस्या नै परेर बोलाएका हुन्छन् । पशु उपचार गर्न पनि निकै गाह्रो छ । किसानले भनेका र अनुमानका भरमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि भेटरीनरी औषधि सहज छैन । कहीँ कतै जाऊँ भन्न पनि फुर्सत पाइँदैन । निजी जीवन नै हुँदैन । साधनस्रोतको पनि अभाव छ । फोन आउनासाथ दौडिहाल्नुपर्छ । कृत्रिम गर्भाधारण पनि निश्चित समयमा गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भयो भने काम छैन । अझ कतिसम्म भने कुनै किसानको गाईभैंसी बिरामी प¥यो भने स्लाइन लगाएर रातभरि नै बस्नुपर्छ । चुनौतीको पेसा भए पनि आफूले गरेको कामबाट भने सन्तुष्टि नै मिलेको छ भनौँ ।
५) तपाईंको दौडधूप हेर्दा प्रसस्तै कमाउनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ । यो पेसामा समस्याचाहिँ के छ ?
–श्रमअनुसार प्रतिफल कम छ । मेहनतअनुसारको कमाइ हुँदैन । अत्याधिक जोखिम बहन गर्नुपर्छ । उपचारका क्रममा पशु मरिहाल्यो भने आफ्नो मेहनत र औषधि उपचारको खर्च खेर जान्छ, फस्छ । चितवन दूधमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । दूध उत्पादनका क्षेत्रमा यतिबिध्न प्रगति हुँदा यसको श्रेय हामीलाई पनि जान्छ । तर, निजी क्षेत्रका पशु प्राविधिकहरुलाई राज्यले कुनै हौसला र प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । जोखिम मोलेर गाउँघरमा पशुको सेवा गरे पनि कामको मूल्यांकन छैन ।
६) राज्यले के गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
–हेर्नुस् मेरो वडामा मात्रै पशपालन गर्ने किसानहरु चार सयको हाराहारीमा छन् । रत्ननगर नगरपालिकाभित्र मात्रै करिब ११ हजारको संख्यामा छन् । यति धेरै किसानका पशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरुमा आवश्यक तालिम छैन । शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन । राज्यकै लागि नै काम गर्ने हामजस्ता प्राविधिकले जोखिम मोलेर रातदिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
चितवन दूधमा आत्मनिर्भर घोषणा हुनुमा के प्राइभेट सेक्टरको योगदान छैन र ? अहिले ३०० भन्दा बढी निजी क्षेत्रका पशु प्राविधिक र एकसयको संख्यामा सरकारी प्राविधिक छन् । हामीले चाहेको प्रविधि सहयोग, प्राविधिक ज्ञान, समयसमयमा आवश्यक तालिम नै हो । अहिले तीन तहको सरकार रहे पनि प्राविधिकहरुलाई दक्ष बनाउने विषयमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । यस विषयमा सरकारले चासो दिनुपर्छ ।
७) पशुपालन पेसामा किसानको भविष्य कत्तिको सुरक्षित देख्नुहुन्छ ?
–६५ प्रतिशत किसान कृषि पेसामा आवद्ध छन् भनिन्छ । तर, उत्पादनले तीन महिनाभन्दा बढी धान्दैन । सरकारले उत्पादनमूलक कार्यक्रम ल्याउनुप¥यो । अहिले सबैथोक निर्यातमुखी भइसक्यो । अहिले पनि अधिक किसानले परम्परागतरुपमा पशुपालन गर्छन् । त्यो तुरुन्त परिवर्तन गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्तामा कृषि तथा पशुपालनतर्फ कुनै आकर्षण नै छैन । सरकारले गुणस्तरीय औषधि सर्वसुलभ बनाउनुप¥यो । अनुदानको कार्यक्रम मकै छरेजस्तो भयो । व्यावसायिक किसानलाई मात्रै अनुदान दिइने व्यवस्था गर्नुप¥यो । किसानले १० हजार अनुदान पाउने लोभमा ५० हजार खर्चेर गोठ बनाएका हुन्छन् । तर, परम्परागत रुपमा एउटा गाई पाल्छन् । एउटा गाई पाल्नका लागि सरकारले अनुदान दिने होइन । सरकारले व्यावसायिक किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिइनुपर्छ । राज्यले दिएको पैसाको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । अनिमात्र त्यसको प्रतिफल देखिन्छ । किसानलाई घाँस काट्ने मेसिन, दूध दुहुने मेसिनजस्ता प्रविधिहरुमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । अनिमात्रै किसानले पनि पशुपालनलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन सक्छन् । सरकारको लगानीको पनि प्रतिफल आउँछ ।
जनैपूर्णिमा, राखी पर्व र गुन्हु पुन्ही
पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरौँ